Oreo Update ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Nokia6နဲ့ Nokia 7! – AsiaApps
Nokia6(2018) နဲ့7ကိုစစချင်းဖြန့်ချီတုန်းကတော့ Android 7.1 Nougat နဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က Nokia Weibo post တစ်ခုကြောင့် Nokia6(2018) နဲ့ Nokia7အတွက် Android Oreo 8.0 ထွက်ရှိနေပြီဆိုတာသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nokia အနေနဲ့ Oreo update ထွက်ရှိထားတာ အခုကပထမဉီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့လ အနည်းငယ်တုန်းကလည်း Nokia5နဲ့6အပါအဝင် Nokia ဖုန်းအချို့မှာ Oreo update ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Speed ​​upgrade, more concise, more fluid,anew generation of background management mechanism, lower power consumption and more power saving; gesture operation, turn off the screen prompts, monthly security updates ~ Nokia6updates will also be coming soon, please be patient !
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Oreo update မှာမြှင့်တင်ထားတဲ့အရာအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ Nokia6မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Oreo update က Beta အဆင့်သာရှိခဲ့တာပါ။ Nokia6အတွက် တကယ့် Oreo update ဟာတော့မကြာခင်မှာပဲရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Nokia6(2018) and Nokia7Oreo update roll out officially started https://t.co/eWZ3QhUhx5 pic.twitter.com/7Syn0UOI6a
— GSMArena.com (@gsmarena_com) January 15, 2018